जोएनेपाल | यी बलिउडका चर्चित अनुहार, जसको वास्तविक नाम तपाइँलाई थाहा छ ?
यी बलिउडका चर्चित अनुहार, जसको वास्तविक नाम तपाइँलाई थाहा छ ?
जोएनेपाल २०७७ माघ २१ गते बुधबार, ०७:४१ AM
मुम्बई– बलिउडमा उत्कृष्ट अभिनय गरेर कलाकारहरुले आफ्नो नामलाई लोकप्रिय बनाएका छन् । तर यी लोकप्रिय नामको वास्तविक नाम चाहिँ सायद कमैलाई मात्र थाहा होला ।
फिल्ममा आउनु अघि उनीहरु केहीले ज्योतिष विज्ञानका कारण त केहीले अन्य कारणले आफ्नो नाम बदले । यहाँ नाम बदलेर लोकप्रिय बनेका अभिनेता अभिनेत्रीको वास्तविक नाम प्रस्तुत गरिएको छ ।